Nabadoonada gobolka Bari oo soo dhoweeyay howlagalo ay ciidamada amaanku wadaan – Radio Daljir
Nabadoonada gobolka Bari oo soo dhoweeyay howlagalo ay ciidamada amaanku wadaan
Bosaso, May 10 – Hogaamiye dhaqameedka gobolka Bari ayaa maanta soo dhoweeyey howlgalada ay ciidamada amaanka ee magaalada Boosaaso dhowaan ka sameeyeen xaafado kuyaala magaalada Boosaaso.
Nabadoon C/qaadir Axmed Xarago oo ah afhayeenka nabadoonada gobolka Bari ayaa ka sheegay kulan nabadoonada ay maanta magaalada Boosaaso ku yeesheen inay soo dhoweynayaan howlgaladii ay ciidamada amaanku dhowaan ku qaadeen dadka ka gancsada maandooriyaha.
Waxaa uu u jeediyay ciidamada amaanka inay sii joogteeyaan howlgalada amniga ay ku sugayaan islamarahaanatna lagu beegsanayo dadka ku howlan samaynta iyo ka ganacsiga maandooriyaha.
Sidoo kalle Nabadoon Yuusuf Faarax Cali oo isaguna ka hadlay shirka ayaa soo dhoweeyey howlagalada ay ciidanku wadaan, waxaana uu ka codsaday dowladda inay sharciga horkeenta dadka maandooriyaha ka ganacsada, laguna ciqaabo falka ay ku howlanyihiin.
Ciidamada amaaanka ee magaalada Boosaaso ayaa todobaadkan howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso waxaa ay ku xireen 23-qof oo lagu eedeeyey ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha.